ngomphathi ku 21-01-11
Ixhaswe yiChina Chemical Industry Association futhi yenziwa yiZouping Mingxing Chemical Co., Ltd., umhlangano wokuthuthukiswa kwekhwalithi ephezulu yezimboni eziphakathi zemithi ububanjelwe eDezhou, esifundazweni saseShandong. Indikimba yengqungquthela ithi “ukushintshana ngemingcele, ukuhlanganiswa ...
IZouping Mingxing Chemical iqhubekela phambili endaweni yamakhemikhali edijithali
Ulayini wokukhiqiza osetshenziswayo phambi kwethu ulayini wokukhiqiza ohlakaniphile owenziwe ngcono futhi waguqulwa yiZouping Mingxing Chemical Co, Ltd. ngokutshalwa kwemali ngama-yuan ayizigidi eziyi-100 kulo nyaka. Njengamanje, imikhiqizo yamakhemikhali ifakwe ekukhiqizeni ngamaqoqo. Ngokusho komphathi jikelele ...
Ukukhuphuka kwentengo yabaphumelele i-API kwikota yesithathu kudonse ukunaka okukhulu
Ukuthuthukiswa komkhakha we-API kanye nomkhakha wemithi akuhlukaniseki, futhi kuyavumelana. Kuyaqondakala ukuthi ngenxa yokubhekelwa kwezemvelo okuya ngokuqina, abakhiqizi be-API badinga ukwengeza inqubo noma ukunciphisa isikali sokukhiqiza ngaphansi kwezimo zokuqala, ezizokwenza ...